माओवादी केन्द्रद्वारा नाम सिफारिस, नारायणकाजी गोरखा—२ बाट, अरु को कहाँबाट ? – Etajakhabar
माओवादी केन्द्रद्वारा नाम सिफारिस, नारायणकाजी गोरखा—२ बाट, अरु को कहाँबाट ?
गोरखा । मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोरखाले प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम प्रदेशमा पठाएको छ ।
प्रदेशले यी नाम हेरेपछि केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने टुंगो लगाउने जिल्ला इन्चार्ज चूडामणि खड्काले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०६, २०७४ समय: ९:४६:२१